Ị nwere ike inyere m aka ịchọta akara azụ PR dị elu maka ire ere?
Amaara m na ọ dịghị mfe mgbe nile ịchọta ebe ziri ezi na ebe dị nchebe na-enye akwa azụlink PR maka ire ere. Ma, n'ezie, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịmepụta backlinks zuru ezu na nnukwu ngalaba Authority, PageRank, na Page Number ọtụtụ - n'ụzọ zuru oke n'ụzọ nkịtị, n'enweghị ụgwọ ọ bụla a kwụrụ ụgwọ. Ebumnuche, na-eji ihe odide ndị ziri ezi iji nweta akara azụ azụ dị mma na-atụ aka na ibe weebụ gị na saịtị ma ọ bụ blog. Enwere m ụyọkọ ebe maka ịchọta akwa azụlink PR maka ire ere - na-atụ anya na ọ dịkarịrị ihe ize ndụ ọ ga-ekwe omume iji merie onwe gị na Google - gazebi pieghevoli 3x2.
Right Right with Back PRs for Sale
Ọ dịghị mkpa ịhapụ oge ị na-enye gị ncheta na - agwụ ike - ihe ọ bụla metụtara njikọ ụgwọ maka SEO ga - bụrụ ezigbo ihe ize ndụ. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-egosi gị ụfọdụ ojiji-gosipụtara ma karịa ma ọ bụ obere ebe nchekwa kama. Ọ bụrụ na ị nwere obi ike (ma ọ bụ na-enweghị nchekasị - onye mara?), Ebe a ka ị nwere ike ịnye gị SEO - ma ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ị naghị ebuli ọkọlọtọ ọbara na Google ozugbo.
Njikọ Njikọ - a ga - enye ndụmọdụ a ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma iji mee ka ị nyochaa mbụ site n'ị nweta nsụgharị azụmaahịa nke ọdịdị dị mma ka ọ dị mma iji welie SEO gị n'ọtụtụ. Ị nwere ike ịchọta ebe dị iche iche dị iche iche njikọ dịgasị iche na DA, PA, na PageRank ọtụtụ. Rịba ama, nyere na ego gị dị oke oke, nhọrọ a ga - abụ nhọrọ kachasị mma - inye aka ma ọ bụrụ ọnụ ala ọnụ ala n'etiti ebe ndị ọzọ eji eme ihe-ebe a na - eji akwa azụmaahịa PR maka ire ere.
Black Hat Links - bụ ebe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ di na nwunye na-emeghachi azụ ma ọ bụ ọbụna nnukwu set na-abata na nnukwu ego. ego. Ma ana m atụ aro ka ị tụlee ebe a na-akwụ ụgwọ ụlọ akwụ ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịzụta ihe dịkarịa ala 50-60 njikọ. Na akụkụ pụrụ iche nke ebe a bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụla backlink ị nwere ike ịzụta na-abịa na àgwà DoFollow dị.
Fiverr - ọ bụ ezie na saịtị a maara nke ọma n'etiti ahịa dijitalụ na ụlọ ahịa mmekọ mmekọ nwere ike ịghọ ezigbo nhọrọ maka ndị na-achọ nnukwu backlinks maka ire ere. Ma, rịba ama na Fiverr ga-eme ka ị nwee ọganihu dị mma na SEO naanị mgbe ejiri nlezianya mee ya. M na-ekwu na e nwere ọtụtụ ngwá ọrụ akpaghị aka dị n'ebe ahụ, n'ihi ya, ị gaghị agba ọsọ maka inweta ọtụtụ njikọ dịka o kwere mee. Cheta na uru ngwa ngwa na ụlọ njikọ ga-ahụ enyo na Google.
Backlinks Hub - bụ nhọrọ ikpeazụ m na akwadoro na-agbalị ịzụta mma backlinks maka SEO. N'etiti akụkụ ya kachasị elu bụ nkwa ọ bụla nke afọ ọ bụla na-abịa na backlinks Hub. Ihe omuma a yiri ka ị na-ebufe ihe kariri uru. Otú ọ dị, mkpado ọnụahịa ndị ọzọ nwere ike iyi ka ọ dị ntakịrị.